Kase iPhone 11 Pro Max Case With Lens ~ ICT.com.mm
HomeKase iPhone 11 Pro Max Case With Lens
Kase iPhone 11 Pro Max Case With Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Kase ကနေ iPhone 11 Series ဖုန်းတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Phone Case အနေနဲ့ရော CPL Filter ၊ 10x Macro Lens နဲ့ Fisheye Lens တွေပါဝင်တဲ့အတွက် တစ်မျိုးဝယ်ယူပြီး ၄ မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lens တွေကို သီးသန့်သယ်သွားဖို့မလိုအပ်တဲ့အတွက် Mobile Photography ကို... [Learn more]
Brand: KaseSKU: N/ASee more: Apple Accessories, Computer Accessories, Deals, iPhone & iPad Accessories, iSure, Kase, Lifestyle Gadgets, Products, Recent Updates, Shop, Under 100kFilter by: Apple Cases & Covers, iSure, Promotion, Super Sale
Kase ကနေ iPhone 11 Series ဖုန်းတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Phone Case အနေနဲ့ရော CPL Filter ၊ 10x Macro Lens နဲ့ Fisheye Lens တွေပါဝင်တဲ့အတွက် တစ်မျိုးဝယ်ယူပြီး ၄ မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Lens တွေကို သီးသန့်သယ်သွားဖို့မလိုအပ်တဲ့အတွက် Mobile Photography ကို စတင်လေ့လာနေတဲ့ ဝါသနာရှင်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
CPL : Circular Polarizer/linear Filter ဟာဆိုရင် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းကို အဓိကကာကွယ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ဓါတ်ပုံမှာမလိုအပ်တဲ့ အလင်းရောင်တွေ၊ တခြားအရောင်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
10X Macro Lens ကတော့ ပန်းပွင့်၊ အင်းဆက်တွေနဲ့ တခြား Product Photography ရိုက်ကူးမှုတွေအတွက် အနီးကပ် အနုစိတ်ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကူးဖို့အတွက် သင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Fisheye Lens ကတော့ 180-degree Ultra-wide Angle အထိရှိမှာဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံကို ထင်ရှားတဲ့ Distortion ထည့်သွင်းပြီး Wide Panoramic သို့မဟုတ် Hemispherical (စက်ဝန်းပုံ) ဓါတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Kase high quality phone case for iPhone 11 series while having CPL Filter, 10x Macro Lens and Fisheye Lens as all-in-one package.
Best suitable for mobile photography enthusiasts.
CPL : Circular Polarizer/linear can reduce the glare from reflected surfaces, thus removing unwanted light, reflections or colors.
10X Macro lens allows you to take sharp, detailed, close-up photos of small subjects such as flowers, insects and products.
Fisheye lens is an ultra-wide 180-degree lens that produces strong visual distortion intended to createawide panoramic or hemispherical image.
Total price:K74,000 K59,200
This item: Kase iPhone 11 Pro Max Case With Lens K74,000 K59,200